Ubunzima Ekuthuthukiseni I-Chain Yezimboni Zomhlaba Engajwayelekile e-United States
I-United States kanye nabalingani bayo bahlela ukusebenzisa imali eningi ukuthuthukisa imboni yomhlaba engajwayelekile, kepha kubonakala ngathi ihlangabezana nenkinga enkulu imali engakwazi ukuyixazulula: ukushoda okukhulu kwezinkampani namaphrojekthi. Ukulangazelela ukuqinisekisa ukutholakala komhlaba okungajwayelekile nokuthuthukisa amandla wokucubungula, iPentagon i ...
I-China Ithumele Amathani Angu-3737.2 Womhlaba Ongajwayelekile ngo-Ephreli, yehle ngama-22.9% kusuka ngoMashi
Umhlaba ongavamile unedumela "lomhlaba onamandla onke". Kungumthombo obalulekile odingekayo emikhakheni eminingi yokusika njengamandla amasha, i-aerospace, i-semiconductor njalonjalo. Njengezwe lomhlaba elingajwayelekile emhlabeni, iChina inezwi eliphakeme. Ngokuya ngemininingwane esemthethweni, i-C ...
Ukuzenzakalela Kuthuthukisa I-Horizon Magnetics Magnet Quality
Ngonyaka we-2020 Horizon Magnetics engeza amanye amasethi amane emishini yokusika enezintambo eziningi ukusika zombili izivimbele uzibuthe no-arc ezimise u-Neodymium ukuze kwandiswe izinga lekhwalithi losayizi wamagnet nokubukeka nokusebenza kahle kwemishini. I-magnet engavamile yomhlaba i-multi-wire cutting machine ngokuzimela ...
I-Horizon Magnetics Iwebhusayithi Entsha Yethulwe Ngokusemthethweni
I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co., Ltd ingumkhiqizi ohlanganiswe uqonde womazibuthe womhlaba ongajwayelekile we-Neodymium kanye nemihlangano yawo ehlobene nawo kazibuthe, eyaziwa kabanzi ngamakhasimende emhlabeni jikelele. Kepha inguqulo yethu yakudala yewebhusayithi ibala imikhiqizo ekhawulelwe kakhulu futhi akulula nge-pote ...
I-Horizon Magnetics Business Rise ngonyaka ka-2020
U-2020 ngunyaka onzima ezinkampanini eziningi ngenxa yokuhlaselwa yi-COVID-19 engalindelekile. Ibhizinisi lezinkampani eziningi liyancipha. Kodwa-ke, iHorizon Magnetics ikhuphuka kancane kunangonyaka odlule ngenxa yokuxhaswa okuqhubekayo okuvela kumakhasimende ethu athembekile. I-Ningbo Horizon Magnetic Technologies Co, Ltd yenzelwe ...